Farira ne Freeware chikamu chikamu (3)
mubvunzo Farira ne Freeware chikamu chikamu (3)
1 gore 6 mazuva apfuura #945 by DRCW
Fara ne Freeware ndege (chikamu 3)
Pano ndiyo iyo yekupedzisira penyaya iyi (zvakare zvakare fadza chikamu 1 uye 2)
Saka takaita kuti KLM 737 iwedzere kufanana nehini yekubhadhara asi kune zvimwe zvinhu zvatinogona kuita. Kana iwe wakatevera chikamu 1 &
2, ipapo iwe wakakanda iyo 717-200 kubva pawebsite yeRioooo.com. Nekuisa iyi, iwe wakatowedzera kuwedzera FDSFX pop-
iyo inokubvumira kuti uve nevashandi vari mubhodhi nekushandura pane panhizha. Zvechokwadi kana uri kushandisa FS-Passenger
saka zvingaratidzika zvisingabatsiri asi pane dzimwe nguva apo iwe unoda kubhururuka usina FSP.
Ngatiti iwe unoshandisa FSP nguva dzose uye usaona chidimbu chekushandisa FDSFX pop-up, Unogona kugara uchigadzirisa uye kuchinja mutauro wega wega
kushandura komunhu oga kumafuta emimhanzi kana chero imwe fomu yeMP3. Kamwe iyo 717-200 yakagadzirwa, zvinowanzoisa kuisa huru
teererai mufaira guru reFSX. Kana uchinge wazarura faira huru yemhepo iwe uchaona faira yakaratidza "FDSFX". Heanoi
apo ma audio files mp3 akachengetwa:
20_Taxi Kuna Gate_Ann
Hazvina maturo kutaura kana iwe wakashandisa iyi panhizha yehutano haisi iyo yakakura. Unogona kuchenesa mafaira asina kukwana ne MixPad
Multitrack Recording Software yakasununguka uye inowanika pamutsara pa: www.nch.com.au/mixpad/
Dzvanya pa "download free version pano"chikamu.
Tora faira yaunoda kuchenesa Muenzaniso: (18_On Approach_Ann) wokopa nokuiisa mu Mixpad. Dzvanya pamigumisiro
Icon uye shandisa Equalizer (Maonero) panguva yekutamba audiophile. Rongedza zvirongwa apo iwe unowana purogiramu yakanakisisa uye tora
apply. Edza kukurudzira nekucheka freq. kuti uwane ruzha rwakanaka. Kana ukaona kuti injini rumble is overbearing try cutting freq
pakati pe100 ne250hz. Kana iyo Highs ichinyengedzwa edza kuvhara freq inotarisana ne5 kusvika 7 khz uye iwedzere kumusoro freqs. Kana iyo
ibhuku rakanyanyisa iwe unogona kukurudzira nekunyanya paKupedza Icon uye kuwedzera volume kusvika ku400%. Kamwe pangopedzwa
paImba uye wozoitumira kune yako yekudhinda faira mumawindo. Buda kunze kweCchangPad. Iwe uchabvunzwa kana iwe uchida kuchengeta "
sarudza kwete "
Vhura faira yako yekudzivirira uye pachava nefaira inonzi "Default Project" Iyi ndiyo faira yawakagadziridza. Dragira iyo yako
pakombiyuta uye itazve zita racho (18_On Approach_Ann). Iwe unokwanisa ikozvino kuikora uye kuisungirira mufaira reCD FDSFX uye kana
yakakurudzira sarudza Sarudza uye Shandisa. Iwe zvino wakatsiva yepakutanga mashoma audio audio file newazvo itsva yavandudzwa
Iwe unogona kutora mafaira ose akanyorwa pamusoro apa kana MP3 ipi yaunoda. Iti iwe unoda kudzorera (01_Gate Ambience) ne
mimhanzi yefaira mumabhuku ako eMP3. Iwe waizongodhonza imwe kopi yemimhanzi yefaira kudesktop yako uye itazve iyo (01_Gate
Ambience) ipapo kopira & uiise mufaira guru re FDFSX uye sarudza kopi uye shandura paunokurudzirwa.
Cherechedza: The MixPad download inosanganisira hurukuro yefaira yekutengesa chirongwa chinonzi NCH Suite. Neyi purogiramu iwe unogona kutendeuka
MP3 iri kuWave mifananidzo inoita kuti zvive nyore kugadzirisa nekuchinja chero faira rezwi .
Zvakanaka ikozvino tichawedzera a pushback uye tekesi nokukurumidza panikira kuKLM 737. Iyi purogiramu isuwareware inozivikanwa se
Groundhandling5 . Enda kune webusaiti ino: flyawaysimulation.com/downloads/f...ing-gauges-
Kamwe yakadhindwa usati wabudisa iyo inogadzira faira mune zvinyorwa zvese faira uye ichitumidza kuti "Groundhandling5" uye uikweze
desktop yako. Bvisa mafaira ose kubva pakudhinda kwako kuenda kuGroundhandling5 folder yawakasika. Zvino vhura FSX yako huru
faira ipapo Kopa & Nyora "Groundhandling5" mufaira yako huru yeFSX. Iwe unofanira kungoita izvi kamwe chete.
Zvino svinurai KLM 737 file kubva paFSX simobjects / Firipi folda. Tsvaga mapurisa pane pepa faira ipapo kopi uye isa pasi
RCB_Groundhandling5 Cabinet Faira muKLM 737's Panel Folder (Aya ndiwo mazita eGroundhandling5)
Kopa uye Nyora RCB_Groundhandling5_Sound.dll kupinda KLM 737's Panel Folder (iyi faira inotaurira FSX kushandisa izwi
kubva muruzha rukuru rwenzwi)
Pfuurira kuzarura faira README uye iwe uchawana chikamu chinotevera:
oneka = 0
gauge02 = RCB_Groundhandling5! Kutengesa, 79,2,64,61
// gauge03 = RCB_Groundhandling! Shandisa ToebrakePedals, 0,0
Vhura file yeKLM Panel.cfg uye chikamu chepamusoro chinofanira kutarisa seizvi:
window01 = Kuchinja
Window04 = Pamusoro Panzvimbo
Window06 = Dhoo Rokudzora
Window07 = Chengetai Panel
Window15 = Mhepo Gauge
Window16 = Kuchengeta HSI
Window17 = Kuchengeta Altimeter
Window18 = Kuchengeta Maitiro
Pasi paWowow21 = Radio Stack rudzi mukati Window22 = Groundhandling5
Zvino pfugama pasi kusvikira wawana:
chinzvimbo = 8
Pasi pasi pechikamu ichi ndipo paunonyora nekunyora:
Shandura ** kusvika ku22 saka inosvika [Window22] [/ b]
//gauge03 = RCB_Groundhandling! ShandisaToebrakePedals, 0,0
Bvisai // pakutanga kwemutsara uyu !!!
Kuti uedze: Tanga FSX uye kana uchinge wakatakurwa muKLM 737, chengetedza yako kiyi ye-alt (menyu yepamu inofanira kuonekwa kumusoro
chinyorwa) sarudza kuona / Instrument Panel / uye chengeta paGroundhandling5. Iva nechokwadi chokuti inoshanda panguva iyo iri pedyo FSX.
Nekuchinja kwatakaita kusvika ikozvino ungadaro wakacherechedza kuti hakuna runyararo paunosarudza Fasten Seatbelt & No Smoking
Izvi zviri nyore kugadzirisa uye ini ndakasiya iyo yekupedzisira nokuti ndaida kuti unzwisise nyaya dzeeopophile kutanga. Iye zvino zvatakafukidza
iyo nzvimbo inoita kuti igadzirise. Kutanga iwe une ndege munharaunda yeFSX isina kukwana iyo yakashanda sebhebhetti uye hapana kusvuta kushanduka
nemanzwi echero kuitira kuti tifunge kuzarura imwe yefaira idzi. Kamwe zvakare muFSX huru folder / simobjects /
ndege. Tsvaga iyo Airbus_A321 faira uye woizarura.
Vhura faira yezwi uye tsvaga faira yakaridzwa "inzwi" woizarura.
Tsvaga pasi uye kopora & peta chikamu ichi kuenda kuneweti yako:
Izvo zvikamu zvepamusoro zvinotarisana neFSX kune imwechete switches inobatanidzwa.
Chikamu chepamusoro (filename = CabinAlert) inoudza FSX kukwevera inzwi kubva kune festi huru yeFSX.
Iye zvino svinura firimu reKLM rwiyo uye ipapo pachavawo nefaira rakaratidza "rwiyo". Vhura dhizha rezwi uye kopi & nyora izvi
zvikamu pamucheto chaiwo wezita. Nguva dzose chengetedza nzvimbo pakati pezvikamu.
Iwe unofanirwa kunge uine bhero tone paunoshandisa izvi kushanduka.
Ndinovimba kuti wakadzidza zvakawanda pano. Kana ukangoshandisa matanho aya iwe uchasvika pane imwe nguva apo iwe uchatora freeware
ndege uye kuitora iyo pakombiyuta yako, zvichava zvechipiri kuita izvi kugadziriswa usati waiisa muFSX. Iwe uchakwanisa
kutaurira zvinorevei kunze kwekutarisa kune aircrafts cfg faira uye panzvimbo yefolda kuti usati utaure firimu rwenzwi. Takavhara iyo nyaya
Mune mitsva yeramangwana Ndichakudzidzisa kuti ungaisa sei jongwe re 2D mu ndege dzisingabatanidzi. Nzira yekuwedzera GPS / Autopilot /
Radi / nemamwe mahwindo ekuputika ari mundiza dzisina vana, uye zvino kuti aise sei jongwe rekutakura riri zvishoma
Time chokusika peji: 0.232 mumasekonzi